मनिषाको ट्वीटविरुद्ध उत्रिए भारतीय नेताहरु पनि : तिमी कसरी चीनकी भयौ ?
admin	- ९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ११:५८
एजेन्सी – नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्ने भएपछि अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले आफ्नो देशको समर्थन गर्दै गरेको ट्वीटले यतिखेर चर्चाको शिखरमा छ । नेपालमा उनले गरेको ट्वीटमा सबैले समर्थन गरिरहदा भारतमा भने आलोचना भइरहेको छ । मनिषाले गरेको ट्वीटको जवाफ भारतका विदेश मन्त्री स्वर्गीय सुषमा स्वराजका पति स्वराज कौशलले पनि दिएका छन् । यस विषयमा उनले धेरै वटा ट्वीटहरु गरेका छन्। स्वराज कौशलले ‘म तिमीसंग बहस गर्न सक्दिन मेरी बच्चा, मनिषा...
डान्सर नोरा फतेहीलाई अनिद्राको समस्या !
admin	- २३ बैशाख २०७७, मंगलवार २३:००
काठमाडौं, २३ बैशाख । कोरोना संक्रमणका कारण भारत पनि पूरै लकडाउनको अवस्थामा छ । यस्तो लकडाउनको अवस्थामा बलिउड कलाकारहरु विभिन्न क्रियाकलाप गरेर पनि आफूले आफैलाई व्यस्त राख्ने कोशिस गरिरहेका छन् । यसैबीच डान्सर तथा अभिनेत्री नोरा फतेहीले पनि टिक–टक भिडियोमार्फत् फन्नी अन्दाजमा आफूलाई अनिद्राको समस्याले साताइरहेको बताएकी छन् । नोराले इन्टाग्राममा उक्त भिडियो सेयर गरेकी छन् । उक्त भिडियोको क्याप्शनमा नोराले लेखेकी छन्, ‘जब म पनि सुत्नको लागि कोशिस गर्छु...
admin	- १७ बैशाख २०७७, बुधबार १७:४५
चर्चित बलिउड अभिनेता इरफान खानको निधन भएको छ । मंगलबार उनको स्वास्थ्य अवस्था झनै बिग्रिएका कारण उनलाई मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो । उपचारकै क्रममा बुधबार ५४ वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको भारतीय समाचार एजेन्सीहरूले जनाइएका छन् । ‘आज तक’का अनुसार इरफान खानले मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पतालमा ५४ वर्षको उमेरमा अन्तिम सास लिएका छन् । इरफान लामो समयदेखि बिरामी थिए र उनलाई मंगलबार थप समस्या देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको...
अचानक ‘फ्री’ हुँदा केही गर्न सकिएन -स्वस्तिमा
admin	- १० बैशाख २०७७, बुधबार १४:४५
काठमाडौं । चलचित्र होस्टल रिटर्न्सबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पाइला सारेकी नायिका स्वस्तिमा खड्काले आठ भन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरेकी छन् । उनले नेशनल फिल्म अवार्ड २०१९ मा बेस्ट फिमेल (लिड रोल) अवार्ड र सार्क फिल्म फेस्टिबल २०१९ मा बेष्ट परफरमेन्स अवार्ड प्राप्त गरेकी छन् । प्राय जसो बिहानको उदाउँदो सूर्यलाई चलचित्रको सेटमा भेट्ने स्वस्तिमा अहिले भने लकडाउनका कारण उनले आफ्नो घरमै उदाउँदो सूर्यलाई भेट्न पाएकी छिन । चलचित्र छायांकनको क्रममा...
ढकमक्क फुले पनि एक्लै भयो गुराँस
admin	- २५ चैत्र २०७६, मंगलवार ०५:२०
बेनी - वसन्त ऋतुको सुरुआतसँगै म्याग्दीको उच्च पहाडी क्षेत्रका वनपाखा रंगीविरंगी लालीगुराँसले रंगिएका छन्। पाखाभरि ढकमक्क फुलेका लालीगुराँस यसपालि विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ (कोरोना) भाइरसको त्रास र लकडाउनका कारण पर्यटन नआउँदा 'अभागी'भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको घोडेपानी, पुनहिल, मोहरेडाँडा, फुलबारी, खोप्रा, बयली, मालिका गाउँपालिको सोले, बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीको स्वर्गा श्रम, धवलागिरि गाउँपालिकाको जलजला, देउराली, मंगलाको टोड्के, झाँक्रीपानी, रघुगंगाको रुइसेमा गुराँसको ठूला जंगल छन्। नेपालमा पाइने ३२ प्रजातिकामध्ये घोडेपानी क्षेत्रको जंगलमा...
admin	- १९ चैत्र २०७६, बुधबार ०९:१६
फिल्म हेर्न युट्युबजति सजिलो माध्यम अर्को कुन होला र! युट्युबमा कुन फिल्म छ-छैन भन्ने चाहिँ थाहा नहुन सक्छ। नेपाली फिल्म रुचाउने दर्शकका लागि यहाँ युट्युबमा भएका यी फिल्म लकडाउनको समय काट्ने राम्रो बहाना हुन सक्छ। जात्रा तनावरहित बस्नुपर्ने यो समयमा हास्यप्रधान फिल्म ुलाफिङ थेरापीु बन्न सक्छ। जात्रा त्यस्तै फिल्म हो। जात्राको कथा सामान्य छ। आकस्मिक रूपमा ठूलो धनराशी भेटिएपछि पात्रहरूले पैसा पचाउन गरेको संघर्ष नै यसको कथा हो। यसमा पैसाको...
कमल फुयाँलको ‘मन पर्यो’ (भिडियोसहित)
admin	- १९ माघ २०७६, आईतवार १३:५९
काठमाडौं । लामो समयदेखि पत्रकारितामा संलग्न पत्रकार कमल फुयाँलले गायन यात्रा सुरु गरेका छन् । उनले पछिल्लो समय मन पर्यो बोलको गीत मार्फत गायन क्षेत्रमा देखिएका हुन् । यस अघि पनि बिभिन्न म्यूजिक भिडियो एवम चलचित्रमा अभिनय समेत गरेका फुँयालले गाएको गीत मिठो रहेको छ । गीतमा लक्ष्मण श्रेष्ठ र शशिकला माझीको अभिनय देख्न सकिन्छ । टिकटकबाट उदाएका प्रतिभा नुवाकोटका लक्ष्मण श्रेष्ठलाई टिकटक भिडियो बाटै मन पराएपछि कमल फुयाँलको ‘मन...